ဟဒီးဆ်: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အို - အာဒမ်၏သား သင်သုံးစွဲလှုဒါန်းပါ၊ သင့်အပေါ်ပြန်လည် သုံးစွဲခြင်းခံရမည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အို - အာဒမ်၏သား သင်သုံးစွဲလှုဒါန်းပါ၊ သင့်အပေါ်ပြန်လည် သုံးစွဲခြင်းခံရမည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . မိသားစုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . အသုံးစရိတ်များ။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ် အဗ်ဒုရ်ရဟ်မာန် ဗင်န် ဆွခ်ရ် အဒ်ဒေါင်စီ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ အို - အာဒမ်၏သား သင်သုံးစွဲလှုဒါန်းပါ၊ သင့်အပေါ်ပြန်လည် သုံးစွဲခြင်းခံရမည်။
သင်သုံးစွဲလှုဒါန်းပါ၊ သင့်အပေါ်ပြန်လည် သုံးစွဲခြင်းခံရမည် ဟုမိန့်ထားခြင်းသည် ဥစ္စာပစ္စည်းများကို သုံးစွဲလှူဒါန်းခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲသွားမည်ကို မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ စေးနှဲတွန့်တိုသူ မဖြစ်ပါနှင့်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူအပေါ် သင်ပေးကမ်းသုံးစွဲလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကလည်း သင့်အပေါ်ပေးကမ်း ချီးမြှင့်တော်မူမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ထံတွင်ရှိသည့်အရာသည် ကုန်ခမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင် ရှိသည့်အရာသည် အမြဲထာဝရ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ဤဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော်သည် ထိုအာယသ်တော်၏ အလိုသဘောလည်းဖြစ်သည်။(၎င်းပြင် အသင်တို့သည်မည်သည့် တစ်စုံတစ်ရာကိုမဆို (ထိုအရှင်မြတ် နှစ်လိုတော်မူရာ၌) သုံးစွဲ လှူဒါန်းခဲ့ကြလျှင် ထိုအရှင်မြတ်သည် ၎င်း၏အစားကိုပေးတော်မူပေမည်။) (ကုရ်အာန် ၃၄း၃၉) ဤအာယသ်တော်တွင် ကောင်းမွန်သည့် နေရာများတွင် ပေးကမ်းသုံးစွဲရန် တိုက်တွန်းထားပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ထိုသုံးစွဲမှုအပေါ် အစားပြန်လည် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါရှိသည်။
လှူဒါန်းသုံးစွဲခြင်းသည် ရိုဇီရိက္ခာ ကျယ်ဝန်းပေါများစေမည့် အကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တစ်ဦးအပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ပေးကမ်းချီးမြှင့်မှုသည် ၎င်းသူက ဆင်းရဲသားများနှင့် လိုအပ်ချက်ရှိနေသူများပေါ် ပေးကမ်းလှူဒါန်းလိုက်သည့် အတိုင်းအတာပေါ်တွင် မူတည်သည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဘဏ္ဍာတိုက်များသည် ပြည့်လျှံလျက်ရှိပြီး လျော့နည်းသွားသည်ဟူ၍ မရှိပေ။ အလွန်တရာ ရက်ရောတော်မူသော အရှင်မြတ်သည် ပေးကမ်းချီးမြှင့်ရန်အတွက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြပြီး ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိပေ။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . မိသားစုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . အသုံးစရိတ်များ။ .
ဆွဒကဟ် အလှူဒါနသည် ဥစ္စာပစ္စည်းကို လျှော့နည်းစေမည်မဟုတ်၊ ခွင့်လွှတ်တတ်သူအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဂုဏ်သိက္ခာ ပို၍တိုးပွားစေတော်မူမည်။ မည်သူမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် ရိုကျိုးနှိမ့်ချခဲ့လျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုသူအားမြှင့်တင်ပေးတော်မူသည်။
လူတစ်ဦးသည် အကျိုးကုသိုလ်ကို မျှော်ကိုး၍ မိမိ၏ အိမ်သူအိမ်သားများ အပေါ် သုံးစွဲမှုတစ်ခုခုပြုခဲ့လျှင် ထိုသုံးစွဲမှုသည် ၎င်းသူအတွက် ဆွဒကဟ်အလှူဒါနပင်ဖြစ်သည်။